Shaqaalaha Apple ee California waxay ka talaalaan COVID-19 | Waxaan ka socdaa mac
Apple ayaa tagaya tallaal dhammaan shaqaalahaaga deggan California ee ka soo horjeedda COVID-19. Waxay heshiis la gashay shirkadda dawooyinka ee Walgreens Boots Alliance, waxayna mas'uul ka noqon doontaa tallaalka dhammaan shaqaalaheeda. War weyn.
Waa war weyn oo u shaqeeya shaqaalahan, waa war aad u wanaagsan oo Mareykanka ah, halkaasoo heerarka tallaallada ee la bixiyo ay yihiin kuwo cajiib ah, iyo war rajo leh oo laga helayo dalalka intiisa kale, kuwaas oo bilaabaya qorshahooda tallaal si tartiib tartiib ah. Waxay umuuqataa in iftiinka ladilay dhamaadka tunnelka aafada farxadda leh, oo leh nasiib yar ama kayar taas oo kuxiran aagagga meeraha.
Apple ayaa soo saartay barnaamij cusub oo ay ku caawinayso shaqaalaheeda inay iska talaalaan Covid-19, sida lagu sheegay warbixin cusub oo lagu daabacay Bloomberg. Apple waxay heshiis la gaadhay Walgreens Boots Alliance, oo ah shirkadda iska leh Walgreens, Boots iyo dhawr shirkadood oo kale oo dawooyinka Maraykanka sameeya ah.
Iyadoo loo marayo ururkan, Apple waxay diyaarinaysaa degel ay shaqaalahoodu degan yihiin California Waxay ballan ka sameysan karaan si looga tallaalo COVID-19. Barnaamijku gabi ahaanba waa iskaa wax u qabso kuwa isdiiwaangaliyana kuma qasbana inay isla markiiba shaqsi ahaan ugu soo noqdaan.
Apple horey ayey si cad uga faallootay bishii hore in aysan marin u helin tallaalka COVID-19 shirkad gaar loo leeyahay. Kadib heshiis lala galay gobolka Kalifoorniya, horay ayaad marin ugu laheyd loo sheegay daroogada. Apple ayaa sidoo kale shaqaalaheeda siineysa waqti fasax ah si ay u helaan talaalkooda COVID-19 iyo inay nastaan ​​hadii ay la kulmaan waxyeelo kasta.
Shirkaddu waxay la shaqeyneysaa Walgreens Boots Alliance Inc. si loo sameeyo a xarunta talaalka xafiisyada Apple. Shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda 'Cupertino' oo fadhigeedu yahay Kaliforniya ayaa isku dubarideysa degel si shaqaaluhu ay ballan uga samaystaan ​​si loo tallaalo.
Apple wali si rasmi ah ugama dhawaaqin taariikhda ay fool ka fool ula soo noqonayso dhamaan shaqaalaheeda xafiisyada. Taasi waxay tiri, Tim Cook wuxuu durbaba si cad uga faallooday in shirkaddu ay higsaneyso dib u soo celin buuxda tan iyo bisha Juun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shaqaalaha Apple ee California waxay ka talaalaan COVID-19 shirkada
Iyo tallaalkee ay qaateen?